शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन गोविन्द बन्दीलाई ६ महिने मन्त्री बनाइँदै ! - Nagarik Today
होम » शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन गोविन्द बन्दीलाई ६ महिने मन्त्री बनाइँदै !
शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन गोविन्द बन्दीलाई ६ महिने मन्त्री बनाइँदै !
काठमाडौं । नाटकीय फेरबदल भएन भने नेकपा एसको कोटाबाट अधिवक्ता गोविन्द बन्दी मन्त्री बन्ने तय भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनले यो प्रक्रियामा लामो समय काम गरेका बन्दीलाई मन्त्री बनाउन लागेको स्रोतले जनाएको छ ।
बन्दीलाई यसअघि केपी ओली सरकारका पालामा सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्ष बनाउन खोजिएको थियो । तर तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले नमानेका कारण गणेशदत्त भट्टको नाममा सहमति जुटेको थियो । अ‍ोलीले त्यसबेला नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र विपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवालाई सँगै राखेर युद्धकालीन मुद्दाहरु तपाईहरुसँग जोडिएका छन्, तपाईहरुले जो भन्नुहुन्छ उसैलाई अध्यक्ष बनाउँछु भनेका थिए ।
नेकपा एमाले विभाजन हुनुभन्दा अगाडि नै माधवकुमार नेपालले सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुलाई एकजना कानूनी पृष्ठभूमिका गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन आग्रह गरेका थिए । कांग्रेस पदाधिकारीको अनौपचारिक छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले ‘माधवजीले संसद बाहिर रहेका एकजना कानूनवीदलाई मन्त्री बनाउनुपर्यो भन्नुभएको छ’ भनेर सुनाएका थिए ।
govinda bandiशान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन गोविन्द बन्दीलाई ६ महिने मन्त्री बनाइँदै !